माघ १२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
माघ १२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
डिसी नेपाल , ७ माघ २०७४
साता सोमबार र मंगलबार बाहेक राम्रो रहनेछ । साताको शुरुमा ब्यापारीक लाभ राम्रैसंग हुनेछ । साथीभाई संगको जमघटले मन आनन्दीत हुनेछ । तर बिपरित लिङ्गीबाट नोक्सान हुनसक्ने हुनाले सावधान रहनुहोला । आफूले पहिले गरेका र हाल गरिने कामहरु सबै सफलै हुनेछन्। कामले मान(सम्मान पाईने र पदिन्नतीको पनि संभावना प्रवल रहेको छ । लामो यात्राको योग भएता पनि समयको प्रबन्ध गर्न गाह्रो हुनसक्छ । जीवनसाथीको स्वास्थले केही समस्या दिनेछ । पाईल्सका रोगीहरुलाई भने यो समय निकै चुनौतिपूर्ण हुन सक्नेछ । लाभका हिसाबले यो समय उतम रहेकोछ ।
साता बिहीबार र शुक्रबार बाहेक राम्रो रहनेछ । कामको उतरदायीत्व र चुनौति दुबै बढ्नेछ । तर समयले धेरै हद सम्म साथ दिनाले राज्यकृपा पाईनेछ । मांगलिक कार्यहरुमा सहभागी पनि भईनेछ । समस्याहरुले सताए पनि काम बन्नेछ । तर सोचे जस्तो लाभ लिन भने राम्रै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । यो समय धैर्यवान बनेर सही मौका कुर्ने भएकाले संयमता अपनाउनु होला । मृगौला तथा पेटका बिरामीहरुले आफ्नो स्वास्थमा बढी ध्यान दिनुहोला ।
यो साता सामन्य रुपमा राम्रै बित्नेछ । व्यबसायीक कामको चुनौति फरक तरिकाले बढ्नेछ तापनी तपाई यो समस्याबाट महिनाको अन्तिम तिर निस्कन सक्नु हुनेछ । तपाईको इमान्दारीताले यो समयमा बिशेष महत्व राख्ने हुनाले आफ्नो ईमानलाई सबल बनाउनु होला । यो महिना (माघ) मा काममा अबरोध आउने समस्याको गाँठो फुकाउने नसकिने तथा व्यावसायमा मन्दी हुनसक्ने भएकाले सजग रहनु होला । परिक्षा दिनेहरुका लागि भने यो समयमा त्यति राम्रो छैन् । सोचेभन्दा बिपरित नतिजा आउनसक्ने हुनाले पठनपाठनमा बढि मेहनत गर्नुहोला
यो साता शुरुमा केही आक्षेपहरु आउनेछ भने बाँकी दिनहरु राम्रै बित्नेछन । ब्यापारीक साझेदारहरुको मनस्थिती अचानक परिवर्तन हुनसक्ने हुनाले ठुलो जोखिम नलिनुहोला । तपाँईको कमजोरीले नोक्सान हुनसक्ने हुनाले १(२ दिन शान्त बस्दा राम्रो हुनेछ । सन्तानहरुको प्रगतिले तपाँईलाई आनन्दित बनाउनेछ । तर आफ्नो कामको बोझले सन्तान प्रति क्रुर नबन्नु होला । बढेको आम्दानीले केही सान्तोना दिनेछ । अचानक र अप्रत्यासित लाभ पनि हुनसक्ला । व्यापरीक साझेदार तथा जीवनसाथी संग वादविबाद हुनसक्ने हुनाले आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्ने श्रेयसकर हुनेछ ।
सोमबार र मंगलबार बाहेक साता उत्साहप्रद नै रहनेछ । केही किचलो भएतापनि परिवारीक जमघटले मनमा आनन्द दिनेछ । तपाँईको कुरा काटनेहरुलाई जबाफ दिने यो गतिलो समय हो । तपाँई आफ्ना बिरोधीका चुनौतिहरुलाई सजिलै सामना गर्न सक्नुहुनेछ । नयाँ कामको थालनी गर्नको लागि यो समय उचित छ । सन्तानहरुको पठनपाठन र स्वास्थमा केही कमीकजोरी हुनेछन । समयले साथ दिए पनि बढेको खर्चले तनाव हुनसक्ला । बढेको क्रोधलाई नियन्त्रण नगरे जीवनसाथी संग मनमुटाब हुनेछ ।
बिहीबार र शुक्रबार बाहेक यो साता राम्रै बित्नेछ । तपाँईको पैतृक सम्पतिमा केही बिवाद आउस सक्ने हुनाले सावधान रहनुहोला । सही समयमा अरुले गरेको गल्तिबाट पाठ सिकेर फाईदा लिन सक्नु हुनेछ । तर आफूलाई अति आत्मबिश्बासबाट भने जोगाउनु होला । अरुको देखासिकीले मुर्ख बनिनसक्ने हुनाले हतार नगर्नु होला । दाजुभाईसंगको सम्बन्धमा केही खटपट आउन सक्नेछ । तर दाजुभाईले नै तपाँईलाई समस्याबाट निकाल्न मद्दत गर्नेछन । समयले त्यति साथ नदिए पनि आम्दानीको स्थिती राम्रै रहनेछ भने बचत बिस्तारै बढ्नेछ ।
साताको शुरुमा बाहेक अरुदिन शुभ नै बित्नेछन्। घरेलु समस्याले गर्दा तपाँई एक्लो महशुस गर्नु हुनेछ । परिवारका महिला सदश्यहरुको बिग्रदों स्वास्थले चिन्ता बढाउनेछ। जे काम गर्दा पनि बोझ बढेको अनुभव हुनसक्छ । तर आउँदा दिनहरुमा साथीभाईहरुले सहयोग गर्नेछन् । रुखो बोलीले समबन्धमा तिक्तता ल्याउने हुनाले बोलिमा संयमता अपनाउनु होला । जीवनसाथीको स्वास्थ प्रति सचेत रहनुहोला। घाँटि तथा छातीमा संक्रमण हुन सक्ने संभावना भएकोले स्वास्थ प्रति सचेत रहनुहोला ।
साताको शुरुवात पारिवारिक जमघटमा बित्नेछ । पैत्रीक सम्पतिको विवादले अंशबण्डा सम्म पनि हुनसक्ला । तपाँईको छुच्चो बोलिले नातेदारहरुसंग मनमुटाव होला । तर पहिले देखी गर्ने नसकिएका कामहरु अब बिस्तारे हुनेछन । ठुलो योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सही समय भएकोले आफू द्रिढ भएर लागेमा पुरुषार्थ देखाउने अवसर पाईनेछ । लाभका स्रोतहरु बढ्नेछन् । जीवनसाथीको सहयोगले तपाँईलाई काममा ठुलै सहयोग मिल्नेछ । आफूलाई कमजोर ठान्नेहरु संग तपाँईमा बदला लिने सोचपनि आउनसक्ला तर त्यसले कालान्तरमा नराम्रो गर्ने हुनाले त्यसो नगरे बेस होला । आँखा तथा घाँटिको स्वास्थ प्रति सचेत रहनुहोला ।
साताको शुरु उत्साहपूर्ण भएपनि बाँकि दिनहरु मध्यम रहनेछ । सोचे अनुसारको काम गर्न अझै बढी मेहनत गर्नु पर्नेछ । बिभिन्न अबरोधहरुले गर्दा क्रोधको मात्रा बढ्नेछ । बैवाहिक जीवन राम्रै रहने छ भने सन्तानका प्रगतिले पनि मनमा आनन्द दिनेछ । सन्तानहरु अध्ययनकोलागि बिदेश जान सक्ने देखिन्छ । लाभका हिसाबले समय सामान्य नै रहला । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुको कमजोरीको फाईदा उठाउन सकेमा बचत बढनेछ । स्वास्थका हिसाबले शरिरका बिभिन्न भागमा रोगले दुख दिने समय भएकाले आँखा तथा मुख, दाँत र पेटको स्वास्थमा निकै सचेत रहनुहोला ।
सोमबार देखी साता राम्रै बित्नेछ । १–२ दिन बोल्दा होसियार रहनुहोला । आम्दानी र खर्चको संतुलन नगरे परिस्थति बिग्रनेछ । कामगर्दा बिभिन्न किसिमका र नसोचिएका झन्झटहरु आउनेछन । मनमा आलश्यता पनि बढ्नेछ । तापनि आफ्नो अनुभवजन्य बुद्धिले रणनिती बनाएमा दिनहरु केही न केही रुपमा रमाईलो संग बित्नेछ । कार्यालय कामको बोझ बढेपनि बिदेश भ्रमण पनि हुनसक्ला । बैदेशीक व्यवसायबाट राम्रै लाभ मिल्नेछ । बैवाहिक जीबनमा भने तिक्तताको स्थिती रहला । प्रणयसुखमा मात्रै ध्यान दिनाले जीवनसाथी संग मनमुटाव हुनसक्ला ।
सोमबार र मंगलबार बाहेक साता मध्यम रहनेछ । व्यापार व्यवसायका पनि राम्रो नै छ । बिशेष गरि निर्माण ब्यबसायीहरुको लागि यो समय बढी उत्साहपूर्ण हुनेछ । दिर्घकालिन योजनाहरु अगाडी बढ्नेछन । कामगर्ने जोशजाँगर पनि बढ्नेछ । भाग्य बदलिने गरि कामको अवसरहरु आउनेछन्। काममा पदोन्नतिको अवसर पनि पाईनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थले १–२ दिन अस्पतालमा पनि पुर्याउला । क्रोधले पारिवारिक वाताबरण बिग्रने हुनाले आफूलाई संयमीत राख्नु होला । लाभका हिसाबले समय राम्रै भएतापनि खर्चको नियन्त्रण नगरे समस्या आउनेछ। मोजमज्जामा कम ध्यान दिए खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।
आईतबार अपराह्न देखी साता राम्रै बित्नेछ । बढेको कामले पदोन्नति र प्रशंसा पाईनेछ तापनि तपाँईको कामको आलोचना भने हुनेछ। काममा अपर्झट समस्याहरु आउन सक्नेछन । आम्दानी राम्रै रुपमा बढ्दै जानेछ । घरमा बिलासिताका सर-सामानहरु भित्रनेछन । कामको बोझ आगामी दिनहरुमा कम हुँदै जानेछ । चोटपटक र दुर्घटनाको योग देखिएकोले सवारी साधन चलाउँदा सजग रहनु होला । आमाशय र मलद्वारमा समस्या आउनसक्ने हुँनाले खानपानमा सजग रहनुहोला । दिर्घकालिन रोगबाट बच्न नियमित जाँच गराउनु होला। कुलत र अम्मलमा फस्न सक्ने हुनाले विवेकशिल बन्नुहोला।
वासिङ्टनमा तामाङ समुदायले यसपालिको ल्होछार भव्य रुपमा मनाउँने